Barcelona Mar Kale Bah Dili Karta Kooxda Ay Sida Weyn U Xafiiltamaan Ee Real Madrid, Maxay Ku Samayn Kartaa – Kooxda.com
Home 2018 March Spain, Wararka Maanta Barcelona Mar Kale Bah Dili Karta Kooxda Ay Sida Weyn U Xafiiltamaan Ee Real Madrid, Maxay Ku Samayn Kartaa
Real Madrid ayaa wakhti hore ka baxday tartanka loogu jiro hanashada horyaalka xilli ciyaareedkan waxa ay haatan mar kale wajahayaan ceebayn kale xilli ay kooxda Barcelona u samayn doonaan wado sharafeed marka ay ku booqdaan garoonka Camp Nou.
Natiijadii Axadii ayaa keentay in ay kooxda Barcelona 11 dhibcood ku qabato hogaanka horyaalka hadii ay sidaas ku sii wadaan ilaa inta ay la kulamyaaan kooxda Real Madrid horyaalka ayaa u leexday dhanka Barcelona.
Kulanka 2-aad ee El Clasico ayaa la qaban doonaa iyada oo 2 kulan ka haran yihiin dhamaadka horyaalka La Liga ee xilli ciyaareedkan.
Hadii ay Barcelona hogaanka ku hayso 10 dhibcood ka hor kulanka Clasico-da Los Blancos ayaa markaa samayn doonta wado sharafeed ay u samayn doonto Barcelona.
Maaha markii ugu horaysay ee ay labada kooxood soo wajahday in ay tahay in ay wado sharaf isku sameeyaan xilli ciyaareedkan iyada oo kooxda Barcelona diiday in ay wado sharaf u samayso Real Madrid bishaii December markii ay Los Blancos ku soo guulaystay koobka Club World cup-ka.
Inkasta oo ay kooxda Real Madrid dalbatay in loo sameeyo wado sharaf ka hor kulanka kooxda Barcelona ayaa diiday waxana kulanka loo bilaabay si toos ah.
Real Madrid ayaan muran ka keenin karin arintan waxana jirta rajo mar kale kooxda Real Madrid iyo tababare Zidane lagu ceebaysan karo ka hor dhamaadka xilli ciyaareedka.